Sei Kuisazve Kaspersky Pasina Kurasikirwa Rezinesi
Iwe unoda kuisazve iyo Kaspersky Antivirus, Kaspersky Internet Security kana Kaspersky Yese Kuchengeteka pane yako Windows PC asi usarangarira yekushandisa kodhi? Heano maitiro ekudzoreredza zviri pamutemo Kaspersky pasina kuisa iyo yekushandisa kodhi.
Paunotenga rezinesi reKaspersky kuchitoro chepamutemo kana chero chimwe chitoro chepamhepo, iyo kodhi yekumisikidza inotumirwa kukero yako yeemail. Iwe unogona kushandisa iyo yekushandisa kodhi kumisikidza yako Kaspersky chigadzirwa mushure mekuisa, kudzoreredza kana kuendesa rezinesi reKaspersky kune imwe PC.
Asi kana iwe ukatenga chigadzirwa cheKaspersky kuchitoro chekutengesa, unowana Kaspersky bhokisi iro rinosanganisira Kaspersky CD pamwe nechidimbu chepepa chine kodhi yekushandisa.
Vazhinji vashandisi vanowanzoisa zvisirizvo pepa rine kodhi yekushandisa uye edza kuiwana chete pavanodzosera Kaspersky
Luckily, kana iyo yazvino yakaiswa Kaspersky chigadzirwa chakaitwa zviri pamutemo paPC yako, haudi kuitisa kodhi yekumisikidza kuti udzorezve uye kumisikidza iyo. Ehe, kana Kaspersky yakaiswa uye yakavhurwa paPC yako, unogona kuisazve uye kuimisikidza pasina iyo yekushandisa kodhi.
Kaspersky inobvumira vashandisi kuburitsa zvigadzirwa zveKaspersky vasina kubvisa iro rezinesi ruzivo kubva kuPC yako. Paunenge iwe wadzosera Kaspersky, iyo setup inoshandisa iyo imwechete rezinesi ruzivo kumisikidza yako kopi yeKaspersky.
Dzorerazve Kaspersky isina kodhi yekushandisa
Heano maitiro ekudzoreredza Kaspersky zvigadzirwa pasina iyo activation kodhi.
Step 1: Open manya raira bhokisi nekudzvanya pamwe chete Windows logo uye R makiyi.
Step 2: Mu Mhanya yekuraira bhokisi, mhando Appwiz.cpl uye ipapo chengeta OK bhatani. Ichavhura Zvirongwa uye Zvimiro hwindo.
Step 3: Tsvaga Kaspersky kupinda kwechigadzirwa, kurudyi pairi, wobva wadzvanya Uninstall / Change kuita.
Step 4: Zvino, iwe uchaona yekusimbisa dialog. Dzvanya Ramba bhatani.
Step 5: Tevere, iwe uchaona Kaspersky setup wizard. Dzvanya Next bhatani.
Step 6: Paunoona inotevera skrini, ita shuwa kusarudza Ruzivo rwezinesi uye ipapo chengeta Next bhatani. Kubva pano zvichienda mberi, tevera pa - screen mirayiridzo yekubvisa Kaspersky.
Kamwe kubviswa kwapera, ndokumbira utangezve PC yako kamwe chete.
Step 7: Dhawunirodha kopi nyowani yeKaspersky wozoisa zvakafanana. Kaspersky setup inozoshandisa iyo yega yakachengetedzwa rezinesi ruzivo kumisikidza yako kopi yeKaspersky chigadzirwa. Nakidzwa!
Maitiro Ekuchinjisa Kaspersky License Kune Imwe Computer
Kaspersky VirusDesk: Nyora Files Online Uchishandisa Kaspersky
Dzokazve Windows 10 Pasina Kurasikirwa Chirongwa Chekuita
Filed Under: kuisa kaspersky con codigo